आज घट्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो तोलाको ?
Homeबिबिधआज घट्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो तोलाको ?
December 6, 2020 kandai kanda 1 बिबिध
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आइतबार सुनको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत शुक्रबार ९२ हजार ९ सय रूपैयाँमा किनबेच भएको छापावाल सुनको मूल्य आइतबार २ सयले घटेर ९२ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको हो।
तेजावी सुनको भाउ ९२ हजार २ सय ५० रुपैयाँ कायम भएको छ।
आइतबार चाँदी भने स्थिर छ। महासंघका अनुसार गत शुक्रबार १ हजार २ सय १० रुपैयाँ प्रतितोलामा किनबेच भएको चाँदीको मूल्य आइतबार स्थिर छ।
‘दि भ्वाइस अफ नेपाल सिजन ३’को अडिसन सुरु ! कसरी सहभागी हुने ?
पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको स्वास्थ्यमा सुधार
काठमाडौं । दिल्लीको एपोलो अस्पतालमा उपचार गराइरहेको पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल भएपछि गत असार २ गते बुधवार नेता खनाललाई दिल्ली लगिएको थियो । अहिले नेता खनालमा ज्व,रो, टाउको दुख्ने र खोकीको समस्या हटिसकेको उनका […]
असारभित्रै नयाँ दल खोल्ने माधव नेपालको तयारी
काठमाडौं, ६ असार । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल एउटै पार्टीमा नरहने निश्चितप्रायः भएको छ । दुई नेताबीच कुरा मिलाउन एकता पक्षधरहरु जतिसुकै लागेपनि ओली र नेपाल मिल्न तयार देखिएका छैनन् । बरु शक्तिसंघर्षमा कस्ले बाजी मार्ने हो भन्ने चासोको विषय बनेको छ […]
सुनको मूल्य निरन्तर ओरालो ,आज कति घट्यो ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा केहिदिन यता सुनचाँदीको मूल्य निरन्तर घटिरहेको छ । बिहीवार तोलामा एकैदिन १ हजार १ सयले गिरावट आएको सुन शुक्रवार १ हजार २ सयले घटेको छ । बिहीवार नेपाली बजारमा प्रतितोला छापावाला सुनको मूल्य ९२ हजार रहेको थियो । भने आज सुनको मूल्य गिरावाट आई […]
कांग्रेस, कम्युनिष्ट र समाजवादी पार्टी रूपान्तरण गरौं,;बाबुरामको प्रस्ताव
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वको स्खलन नै देशको संकटको प्रमुख कारण रहेको बताएका छन् । आइतवार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा एक ट्वीट गर्दै उनले कांग्रेस, कम्युनिष्ट र समाजवादी रूपान्तरण हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। उनले समस्या एकातिर तर समाधान […]